मन्त्री भएको पहिलो दिनमै आयो अक्सिजन मन्त्रीको अर्को काण्ड, सचिव हैरान — Imandarmedia.com
मन्त्री भएको पहिलो दिनमै आयो अक्सिजन मन्त्रीको अर्को काण्ड, सचिव हैरान
काठमाडौ। संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पहिलो दिनमै चर्चामा आएका छन्। बन मन्त्री भएका बेलामा विदास्पत अभिव्यक्ति दिएका आले अक्सिजन मन्त्रीले परिचित भएका थिए। आज फेरी अर्को अभिव्यक्तिले विवादित बनेका छन्।
तीन वर्षअघि वाइडबडी विमान खरिदमा लेखा समितिबाट सर्वाधिक आलोचना गर्नेमध्येका सांसद आले शुक्रबार शपथ लिई सकेपछि जब पर्यटन मन्त्रालयले छिरे उनको मन्त्रालयलप्रतिको असन्तुष्टि कायमै देखियो। मन्त्रालयमा कर्मचारीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले हालकै यथास्थितीमा पर्यटन मन्त्रालय चलाउन नसकिने भनिदिए।
९९ दिनदेखि ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी रहेको निगमप्रति नै उनको आलोचना धेरै रह्यो। उनले नियमित उडान नगराई जहाज घाममा सुतिरहेको र बेलैमा जहाज उडाउन नसकेकोमा असुन्तुष्टि पोखे। यो तालले पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन । वाइडबडीको मात्रै २७÷२८ अर्ब ऋण छ। तर, हाम्रा जहाज घाममा सुतिरहेका छन्। जहाज घाममा सुकाएर पैसा त आउँदैन, त्यसलाई युज गर्नु पर्‍यो। उडाउनु पर्‍यो,’ उनले भने।
निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षत्री पनि सहभागी भएको कार्यक्रममा उनले दुवै जनालाई इंगित गर्दै भने, ‘पहाडका जिल्लामा १०÷१५ करोडका एयरपोर्ट बनेका छन् । तर हामीसँग जहाज छैन । टुइनटर, एटीआरको अभाव छ । त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्छ।
अचेल यात्रुहरुले निगमलाई विश्वास नगर्नुको कारण सुनाउँदै उनले भने, ‘जनताले आज नेपाल एयरलायन्सलाई किन विश्वास गरिराखेको छैन । निजीलाई टाइममा उड्छ भनेर विश्वास गर्ने हाम्रो जहाजलाई वास्तै नगर्ने। अब त्यो हुनु भएन।
उनले कर्मचारीलाई आफूबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहुने भन्दै आफ्ना अगाडि मीठा कुरा गरेर मन्त्रीलाई रिझाउने प्रयास नगर्न भने। ‘एउटा कुरा अनुरोध गरिहालौं। मसँगै हाँसेकै भरमा राम्रो ठानेको नठान्नुहोला। जसले राम्रो काम गरेर राम्रो नतिजा दिन्छ। त्यसमा आभारी हुनेछु।
१५ दिनदेखि भाइरलले थला परेकाले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बताउँदै उनले लगाएका मास्क नखोली लेखेर ल्याएको भाषण पढे।मन्त्रालय मातहतका विभाग, समिति, संस्थान, संग्राहलय लगायतका निकायका करिब ६० हाराहारी मुख्य पदाधिकारीमाझ उनले प्रधानमन्त्रीसँगै हालै भएको एउटा संवाद पनि सुनाए।
त्यो सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय थियो। उनले आफू निर्वाचित डोटी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा जोडिएको प्रसंग निकाल्दै आफ्ना लागि काम गर्न अनुकूल समय रहेको बताउँदै भने, ‘अहिले सजिलो र सरल समय छ।
डोटी र डडेलधुरा जोडिएको जिल्ला हुन्। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले उहाँ (देउवा) लाई भने, ‘सुदूरपश्चिममा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन त सम्माननीय ज्यू ?’ मन्त्री आलेको प्रस्तावमा देउवाले ‘ल हुन्छ बनाउन त। भनेकाले त्यसका लागि कसरी गर्ने योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए।
उनले अहिलेको बजेटमा पनि यस विषयमा प्रसंग आएकाले सरकारको स्रोत, बुट वा अन्य कुनै मोडल सुझाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए। पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका आलेले तत्काल निगमको असारदेखि जारी ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्ने पहिलो दायित्व छ।
यसका साथसाथै कोभिडले थला परेको नेपालको पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने, हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा रोकिएको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई निकाल्नु पर्ने देखिन्छ।
यो पनि, भारतीय विदेशमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलको आग्रह : सीमावार्ता सुरु गरौँ, तुइन प्रकरण फेरि छानबिन होस्: दिल्ली भ्रमणमा रहेको सत्तारुढ कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरलाई भेटेर सीमावार्ता सुरु गर्नुपर्ने र दार्चुला तुइन प्रकरणको फेरि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
शुक्रबार अपराह्न भएको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलका नेता पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति डा. प्रकाशशरण महतले तुइनबाट महाकालीमा खसेर बेपत्ता दार्चुलाका जयसिंह धामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत जयशंकरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘भारतीय विदेशमन्त्रीसँग हामीले खुला रूपमा छलफल गरेका छौँ । तुइन प्रकरणदेखि सीमाका विषयमा संवाद गरौँ भनेर स्पष्ट धारणा राखेका छौँ । भारतमा नोटबन्दीपछि नेपालमा बाँकी रहेको भारु सटही गरिदिन पनि आग्रह गरेका छौँ,’ भेटवार्तापछि महतले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपालले खरिद गरेको कोभिसिल्डको आपूर्ति चाँडै होस्, नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन सहजीकरण होस् पनि भनेका छौँ ।’
करिब आधा घन्टा भएको भेटवार्तामा महतसँगै नेताहरू उदयशमशेर राणा र अजय चौरसिया सहभागी थिए । भारततर्फबाट जयशंकरसँगै भाजपा विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले र विदेश विभाग सदस्य आश्विन जोहर सहभागी थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरिदिएको नोटसमेत लिएर कांग्रेस नेताहरूले नेपालका एजेन्डा राखेका थिए ।
जयशंकरले नेपाल बलियो होस् भन्ने भारतीय चाहना भएको भन्दै नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य भइरहेको र जारी रहने बताएका थिए । महतका अनुसार जयशंकरको भनाइ थियो, ‘हामी देउवा नेतृत्वको सरकारसँग अत्यन्त नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार छौँ । सरकारलाई हाम्रो शुभेच्छा र सहयोग निरन्तर रहन्छ । नेपाल बलियो होस् भन्ने चाहन्छौँ।
नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने, नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोपसहित थप खोप आपूर्ति गरिदिने पनि उनले आश्वासन दिएका छन् । ‘मिति नै यकिन गर्न त सक्दिनँ, तर नेपाललाई हामी चाँडै नै खोप आपूर्ति गर्छौँ, आवश्यक ठाउँमा सहजीकरण र समन्वय गरिदिन्छौँ,’ जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै महतले भने, ‘तुइन प्रकरणमा एसएसबी संलग्न छैन भन्ने रिपोर्ट हामीकहाँ आएको छ।
तर, तुइन प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न आग्रह गरेको महतले बताए। ‘एसएसबीले जे रिपोर्ट दिए पनि एकपटक हेरिदिनुस्, जनताको भावनात्मक सम्बन्धको कुरा छ भनेका छौँ, उहाँले सकारात्मक रेस्पोन्स गर्नुभएको छ,’ महतले भने।
विदेशमन्त्री जयशंकरले कांग्रेस र भाजपाबीच राजनीतिकस्तरमा भएको छलफल आदानप्रदानले दुई देशको सम्बन्धमा समेत योगदान दिने बताएका थिए । ‘राजनीतिक तहमा पनि समानान्तर च्यानलको विकास भएको छ, यसले दुई देशको सम्बन्ध विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ,’ जयशंकरको भनाइ थियो।
महत नेतृत्वको कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार भाजपा मुख्यालयमा भाजपा महामन्त्री अरुण सिंह, विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले, सांसदहरू डा. हिमांशु त्रिवेदी, राजु विष्ट, भाजपा नेता अनिर्वन गांगुली, महिला मोर्चाका नेतृ बनाथी श्रीनिवासन, नितु डबासलगायतसँग तीन घन्टा छलफल गरेको थियो । महतका अनुसार भाजपाको संगठन संरचना, संगठन सञ्चालन, थिंक ट्यांकको संयोजनलगायत विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको थियो ।
महत नेतृत्वको टोली शनिबार उत्तरप्रदेशको लखनउ पुगेर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार दिल्ली पुगेको टोलीले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग बिहीबार अपराह्न भेटवार्ता गरेको थियो।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपालप्रति उनको पार्टीले निरन्तर सद्भाव राखिरहेको बताएका छन्। बिदाइ भेटका लागि निवास पुगेका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा गान्धीले उनको पार्टीले स्थिर नेपाल नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे।
‘हामीले नेपालको लोकतन्त्र, स्थिरता, विकास, समृद्धिका पक्षमा शुभेच्छा राख्दै आएका छौँ, हाम्रो शुभेच्छा र सहयोग भविष्यमा पनि जारी रहन्छ,’ गान्धीले भने। उनले नेपालको हितका विषयमा भारत सरकारका विभिन्न निकायसँग कंग्रेसले आवश्यक परेमा सहजीकरण गरिदिनेसमेत आश्वासन दिएका छन्।
‘असाध्यै राम्रो कुराकानी भयो, राहुल गान्धीजीले नेपाललाई निरन्तर शुभेच्छा र सहयोग छ भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ राजदूत आचार्यले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने। भेटवार्तामा नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी पनि सहभागी थिए।